जहाँ औषधिले होइन शरीरमा आगो लगाएर गरिन्छ उपचार ! – List Khabar
Home / Uncategorized / जहाँ औषधिले होइन शरीरमा आगो लगाएर गरिन्छ उपचार !
admin August 11, 2021 Uncategorized Leaveacomment 35 Views
अहिलेसम्म त तपाईले औषधि तथा जडिबुटीबाटै विरामीको उपचार गरेको देख्नु तथा भोग्नुभएको छ होला। तर छिमेकी मुलुक चीन चाँहि विरामीको शरीरमा आगो लगाएर समेत उपचार गर्ने चलन रहेको छ।
बिरामीको जिउमा आगो लगाएर रोगको उपचार गर्ने यो विधिलाई ‘फायर थेरापी’ भनिन्छ। जुन पछिल्लो १ सय वर्षदेखि चीनमा परम्परागत उपचार पद्धतिको रुपमा प्रचलनमा रहेको छ। विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्याहरुको उपचारमा फायर थेरापी अबलम्बन गरिन्छ। तनाव, डिप्रेसन, अपच तथा बाँझोपन देखि लिएर क्यान्सर सम्मको उपचारमा फायर थेरापीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। उपचारको यो पद्धति चीनको प्राचीन मान्यताहरुमा आधारित छ, जस अनुसार शरीरमा गर्मी र चिसोबीचको सामान्जस्यता काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन्छ।
यस थेरापीमा सुरुमा विरामीलाई घोप्टो पारेर सुताइन्छ र उसको पिठ्यूँमा जडीबुटीबाट तयार गरिएको लेप दलिन्छ । त्यसपछि जडिबुटी दलेको पिठ्यूँलाई एउटा रुमालले छोपिन्छ। त्यसमाथि पानी वा अल्कोहलका छेपिन्छ र अन्तिममा त्यसमा आगो लगाइन्छ।
फायर थेरापीलाई विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। जस्तै त्यस्तो उपचार गराउनेहरुसँग प्रमाणपत्र भए नभएको र जिउमा आगो लगाउँदा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बँच्ने उपाय छन् कि छैनन् ?
फायर थेरापीको काम गर्दै आएका झांग फेंगाओका अनुसार राम्रोसँग नसिक्दै काम गर्नाले कहिलेकाहीँ मानिसहरुको जिउमा चोटपटक लाग्ने वा अनुहार तथा शरीरका अन्य अंगहरु जल्ने घटना पनि हुने गरेका छन्। आफूले अहिलेसम्म हजारौँ जनालाई आगोबाट उपचार गरिसकेको र अहिलेसम्म कुनैपनि यस्तो दुर्घटना नभएको उनको दाबी छ।
झांगका अनुसार फायर थेरापी मानव इतिहासको चौथो ठूलो क्रान्ति हो। यसले चिनिया तथा पश्चिमा दुबै प्रकारका उपचार पद्धतिलाई पछि पारिसकेको छ । विभिन्न जटिल रोगको उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न नसक्ने मानिसहरुका लागि फायर थेरापी निकै सस्तो तथा उत्तम उपचार विधि रहेको उनको दाबी छ।
Previous विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त , चौतर्फी बाट हाई हाई !
Next होशियार ! धेरै वि,र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..डा.को दाबि